နိုးလော့! | ဧပြီ ၂၀၀၈
စပိန်နိုင်ငံမှ နိုးလော့! စာရေးသူ ပေးပို့သည်
“အစိမ်းရောင်မှ အမည်းရောင်သို့ ငါပြောင်းလဲခဲ့၊ ငါ့ကို သေသေချာချာ ကြိတ်ချေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရွှေစင်အဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့။” —စပိန်ရိုးရာစကားထာ။
သံလွင်သီးများ ရင့်မှည့်လာသောအခါ အစိမ်းရောင်မှ ပြောင်လက်နေသောအမည်းရောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော် အမည်းရောင်အသီး၏အတွင်းသားမှာ “ရွှေရောင်” ဖြစ်ပြီး အဆီထုတ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ သံလွင်သီးမှည့်များကို ကြိတ်လိုက်သည့်အခါ ရွှေဝါရောင်ဆီများထွက်လာပြီး ယင်းဆီကို မြေထဲပင်လယ်ဒေသရှိ နေအိမ်များတွင် အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီရှိနေလေပြီ။ ဤရွှေဝါရောင်သံလွင်ဆီသည် သံလွင်ပင်များ၏ အလွန်အဖိုးထိုက်သောထွက်ကုန်ဖြစ်ပြီး ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံအထိ တောင်စောင်းများတွင် အမြောက်အမြားစိုက်ပျိုးထားကြသည်။
အလွန်သန်စွမ်းသော ဤသံလွင်ပင်များမှ ထွက်ရှိသည့် သံလွင်ဆီသည် အရသာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုသည်။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများသည် “ဆီ” ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် “သံလွင်ဆီ” ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု အလိုအလျောက်နားလည်ထားကြ၏။ အမှန်ဆိုလျှင် “ဆီ” အတွက် စပိန်ဘာသာစကားမှာ အာဆေးတီ ဖြစ်၍ အာရဗီဘာသာစကား အဇေ့တ် ဟူသည့်စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာပြီး စာသားအရ “သံလွင်သီးအရည်” ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သံလွင်သီးများကို ကြိတ်ရာမှ ထွက်လာသောအရည်များသည် သံလွင်ဆီစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ သံလွင်ဆီများကို ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများမထည့် ဘဲ သို့မဟုတ် မည်သည့်ဓာတုဗေဒနည်းကိုမျှမသုံးဘဲ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ရာ သံလွင်ဆီ၏ အနံ့အရသာတို့မှာ မပျက်စီးဘဲ သဘာဝအတိုင်းရှိနေသည်။
သံလွင်ဆီကို “အစားအစာ၊ လောင်စာ၊ လိမ်းဆေးနှင့် ဘာသာရေးအခမ်းအနားများတွင် ခေတ်အဆက်ဆက် တန်ဖိုးထား၍ အသုံးပြု” လာခဲ့ကြောင်း သမိုင်းပညာရှင် အာလာ ဇဝင်ဂဲလ်က ရှင်းပြသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်တွင် “ရွှေရောင်သံလွင်ဆီသည် ဆီတကာ့ထိပ်ခေါင် ဖြစ်နေဆဲပင်” ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကထပ်၍ဆိုသည်။ သံလွင်ဆီထုတ်ယူသည့်နည်းမှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည့်တိုင် မပြောင်းလဲသေးချေ။ ဦးစွာ၊ သံလွင်သီးဆွတ်သူတို့သည် အသီးများကို တုတ်များဖြင့် ရိုက်ချပြီး စုသိမ်းကြသည်။ ထို့နောက် သံလွင်သီးများကို အစေ့မထုတ်ဘဲ ကြိတ်ဆုံထဲ အလုံးလိုက် ထည့်ကြိတ်လိုက်သည်။ တစ်ဖန် အနည်အဖတ်များကို ဖယ်ရှားလိုက်၏။ နောက်ဆုံးတွင်မူ သံလွင်ဆီကို အနည်စစ်သည့်ကန်မှ စစ်ထုတ်လိုက်ရာ စားသုံးရန်အသင့်ဖြစ်နေပေပြီ။ *
သို့သော် ရွှေနှင့်မတူသည်မှာ သံလွင်ဆီသည် ဝိုင်ကဲ့သို့ပင် အမျိုးအစားများစွာရှိ၏။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် စိုက်ပျိုးထားသော သံလွင်ပင်ပေါင်းမှာ သန်းတစ်ထောင်ရှိသည်။ * ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်က သံလွင်ပင်အမျိုးအစားပေါင်း ၆၈၀ ကျော်ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးအစားကွဲပြားသည့်အပြင် မြေဆီ၊ ရာသီဥတု၊ ရိတ်သိမ်းချိန် (နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ) နှင့် အဆီထုတ်ယူနည်းအစရှိသည့် အခြေခံအကြောင်းများကလည်း သံလွင်ဆီ၏ ထူးခြားသောအနံ့အရသာနှင့် အရောင်အဆင်းတို့အပေါ် ဩဇာသက်ရောက်၏။ ပုဂ္ဂလိက မြည်းစမ်းအကဲဖြတ်သူများအဖွဲ့သည် သံလွင်ဆီများကို ချိုသော၊ ပြင်းသော၊ သစ်သီးအရသာရှိသော သို့မဟုတ် အရသာအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သောဟူ၍ အရသာအမျိုးမျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်။ မြည်းစမ်းအကဲဖြတ်သူများသည် နောက်ဆုံးထွက်ကုန်၏အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာအောင်ပြုကြသည်။
မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင် သံလွင်ပင်များ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည့် ရာသီဥတုမျိုးရှိသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထုတ်လုပ်သည့် သံလွင်ဆီအားလုံး၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ဤမြေထဲပင်လယ်မြစ်ဝှမ်းဒေသမှဖြစ်သည်။ ဂရိ၊ အီတလီ၊ မော်ရိုကို၊ ပေါ်တူဂီ၊ စပိန်၊ ဆီးရီးယား၊ တူနီးရှားနှင့် တူရကီရှိ တောင်စောင်းများတွင် သံလွင်ပင်တောအုပ်များ ဖုံးလွှမ်းနေသည်ကို ခရီးသွားများ သတိပြုမိကြပါလိမ့်မည်။ အမှန်ပင် သံလွင်ဆီပေါများကြွယ်ဝခြင်းကို “မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၏ ရွှေ” ဟုပင် သတ်မှတ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
မြေထဲပင်လယ်ဒေသအစာ၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သံလွင်ဆီ
ဟင်းလျာများစွာ၏အနံ့အရသာကို ထူးကဲစေရန် မြေထဲပင်လယ်ဒေသအစားအစာတွင် သံလွင်ဆီကို အားထားလာခဲ့ကြသည်မှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေပြီ။ ကြော်လှော်ရာတွင်၊ အချဉ်တည်ရာတွင် သို့မဟုတ် ဟင်းလျာများအနံ့အရသာတိုးစေရာတွင် သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ “သံလွင်ဆီကို အနှစ် ၄,၀၀၀ တိုင်တိုင် စားသုံးလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကောင်းကိုကောင်းရမှာပေါ့” ဟုကျွမ်းကျင်စားဖိုမှူးဖြစ်သူ ဟိုဆေ ဂါသီအာ မာရဲန်က စပိန်ချက်ပြုတ်နည်းတွင် သံလွင်ဆီအရေးပါပုံကို ထိုသို့ထောက်ခံပြောဆိုသည်။ “မကြာသေးခင်နှစ်တွေက ထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာတွေကို ဂရုစိုက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ ‘အရသာရှိတဲ့ဆီ’ ရဲ့အရည်အသွေး မြင့်မားလာတယ်” ဟုသူကထပ်ဆိုသည်။
မြေထဲပင်လယ်ဒေသ ရိုးရာအစားအစာကို စားသုံးသူတို့သည် ထူးထူးခြားခြားပင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သုတေသီများ သတိပြုမိခဲ့ကြသည်မှာ ကြာပေပြီ။ * မကြာ သေးမီက အာဟာရဗေဒပညာရှင်များသည် အဆင့်မြင့်သံလွင်ဆီစစ်စစ်၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတစ်ခုကို စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အဆင့်မြင့်သံလွင်ဆီစစ်စစ်အပါအဝင် မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည် ပို၍ကျန်းမာစေကာ အသက်လည်းပိုရှည်စေကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ကြ၏။ အဆင့်မြင့်သံလွင်ဆီစစ်စစ်ပါဝင်သည့် အစားအစာသည် နှလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ “မြေထဲပင်လယ် ရိုးရာအစားအစာကို စားသုံးကြတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အဆင့်မြင့်သံလွင်ဆီစစ်စစ်ကို အဓိကစားသုံးကြတယ်၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နှုန်းက မြောက်ပိုင်းဥရောပနိုင်ငံတွေထက် ပိုနည်းတယ်” ဟုပညာရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုသည့်အကြောင်းရင်း များစွာရှိပေမည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ သံလွင်ဆီ၌ သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်ကို အကျိုးပြုသည့် အိုလီအစ် အက်ဆစ်များစွာ (၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ) ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သံလွင်ဆီကို ဓာတုဗေဒနည်းနှင့် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ ထုတ်လုပ်နိုင်သဖြင့် ရင့်မှည့်နေသောအသီးမှ ဗီတာမင်များ၊ ပျော်လွယ်သော မပြည့်ဝဆီများနှင့် အခြားသဘာဝပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
သံလွင်ဆီတွင် အနည်းအကျဉ်းပါဝင်သည့် ဗီတာမင်အီးနှင့် ပိုလီဖနောလ် (မွှေးကြိုင်သောဒြပ်ပေါင်းများ) ကဲ့သို့သော ဓာတ်တိုးဟန့်တားပစ္စည်းများကြောင့် သံလွင်ဆီသည် အသားအရေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးကာ စိုပြည်လှပစေသည်။ ထို့ကြောင့် အများအားဖြင့် ယင်းကို အလှကုန် ပစ္စည်းများ၊ အသားလှဆီများ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်များနှင့် ဆပ်ပြာများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ ရှေးခေတ် ဂရိလူမျိုးနှင့် ရောမလူမျိုးတို့သည် အသားအရေသန့်ရှင်းစိုပြည်လှပရေးအတွက် ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ရောစပ်ထားသော သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ခြောက်ရာစုတွင် ပြင်သစ်လက်မှုပညာရှင်များသည် ပင်လယ်ကမ်းနားပေါက်အပင်များကို မီးရှို့ ပြာချကာ သံလွင်ဆီနှင့်ရောစပ်ပြီး ဆပ်ပြာများ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ၏။
ကျမ်းစာခေတ်တွင် သံလွင်ဆီကို အစားအစာ၊ အလှကုန်၊ လောင်စာဆီ၊ ဆေးနှင့် အခြားသောကိစ္စရပ်များ၌လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် သံလွင်ဆီကို ယင်းဆီကိုယ်နှိုက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆီမွှေးများ၏အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ အကြိမ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရည်ညွှန်းထားသည်။
သံလွင်ဆီသည် အစ္စရေးလူမျိုး၏ မိသားစုဘဝတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြထားသည်။ သံလွင်ဆီသည် အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ အဓိကအစားအစာများတွင်ပါဝင်ပြီး သံလွင်ဆီအလျှံပယ်ရှိခြင်းက ပေါများကြွယ်ဝခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ (ယောလ ၂:၂၄) အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ သံလွင်ဆီကို အသားလှဆီအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြ၏။ ရုသသည် ဗောဇနှင့်မတွေ့ဆုံမီ ၎င်း၏ကိုယ်ကို ‘ဆီဖြင့်လိမ်းကျံ’ ခဲ့သည်။ (ရုသ ၃:၃) ခုနစ်ရက်ကြာအစာရှောင်ပြီးသည့်နောက် ဘုရင်ဒါဝိဒ်သည် ‘မြေမှထ၍ ရေချိုးခြင်း၊ ဆီလိမ်းခြင်း၊ အဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးလျှင် ယေဟောဝါ၏အိမ်တော်သို့ သွားခဲ့သည်။’—၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၂:၂၀။
ရှေးခေတ်မှမီးခွက်များသည် လောင်စာအတွက် သံလွင်ဆီကို အားထားကြရသည်။ (မဿဲ ၂၅:၁-၁၂) တောကန္တာရရှိ ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင် မီးထွန်းရာဖို့ “သံလွင်သီးကိုထောင်း၍ယူသော သံလွင်ဆီစစ်ကို” အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ (ဝတ်ပြုရာ ၂၄:၂) ရှောလမုန်ဘုရင်အုပ်စိုးချိန်တွင် သံလွင်ဆီသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၏ အရေးပါသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၃ ဓမ္မရာဇဝင် ၅:၁၀၊ ၁၁) ပရောဖက်များသည် ဘုရင်များကို ဆီသွန်းလောင်း၍ မင်းမြှောက်ခဲ့ကြသည်။ (၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၀:၁) ကြင်နာတတ်သောအိမ်ရှင်များသည် ဧည့်သည်များ၏ခေါင်းကို ဆီလိမ်းကျံပေးခြင်းဖြင့် ဧည့်ဝတ်ပြုကြသည်။ (လုကာ ၇:၄၄-၄၆) ယေရှု၏ပုံဥပမာပါ လူသားချင်းမေတ္တာတင်ပြခဲ့သည့် ရှမာရိလူသည် ဒဏ်ရာရနေသည့်လူ၏အနာများကို ဆီနှင့်စပျစ်ဝိုင် လိမ်းကျံပေးခဲ့သည်။—လုကာ ၁၀:၃၃၊ ၃၄၊ ကဘ။
သံလွင်ဆီကို ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယင်းကို စိတ်သက်သာရာရစေသော ဆုံးမစကား၊ နှစ်သိမ့်မှုတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ခရစ်ယာန်တပည့်ဖြစ်သူ ယာကုပ်က ဤသို့ရေးသားခဲ့၏– “နာသောသူရှိလျှင် သင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍ သူတို့သည် သခင်ဘုရား၏နာမတော်ကို အမှီပြုလျက်၊ လူနာကိုဆီနှင့်လူး၍ သူ့အပေါ်မှာ ဆုတောင်းကြစေ။ ထိုသို့ပြုလျှင် ယုံကြည်ခြင်း၏ဆုတောင်းသံသည် လူနာကိုကယ်ဆယ်၍ သခင်ဘုရားသည် သူ့ကို ထမြောက်စေတော်မူမည်။”—ယာကုပ် ၅:၁၄၊ ၁၅။
သံလွင်ပင်မှ သံလွင်ဆီကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ သံလွင်ပင်တစ်ပင်သည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအား သံလွင်ဆီ သုံးလီတာမှ လေးလီတာအထိ နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ရွှေဝါရောင်အဆင်းရှိသော ဤဆီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေ၍ အသားအရေကို စိုပြည်ချောမွတ်စေကာ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကို အရသာတိုးစေနိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။
^ အပိုဒ်၊7အဆင့်မြင့်ဆုံး သံလွင်ဆီစစ်စစ်နှင့် အဆင့်မြင့် သံလွင်ဆီစစ်စစ်တို့သာလျှင် သံလွင်သီးမှ တိုက်ရိုက်အဆီထုတ်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်စင်ထားသော သံလွင်ဆီနှင့် ကြိတ်ဖတ်ပါသော သံလွင်ဆီတို့ကိုမူ ပြင်းသော မူလအနံ့အရသာ ပျက်ပြယ်စေရန် ဓာတုနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထား၏။
^ အပိုဒ်၊ 8 ယင်းအပင်များမှ နှစ်စဉ် သံလွင်ဆီ ဂါလံပေါင်း သန်း ၄၆၀ ခန့်ထုတ်လုပ်သည်။
^ အပိုဒ်၊ 12 သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်လည်း မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
[စာမျက်နှာ ၁၉ ပါ လေးထောင့်ကွက်]
သံလွင်ဆီ နှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအရာ
▪ သံလွင်ဆီ၏အရည်အသွေးကို ၁၈ လအထိ ထိန်းထားနိုင်သည်။
▪ သံလွင်ဆီ၌ပါဝင်သောအရာများကို အလင်းရောင်က ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် ယင်းကို အေး၍ မှောင်သောနေရာတွင် ထားသင့်သည်။
▪ ကြော်လှော်ရာတွင် သံလွင်ဆီကို တစ်ကြိမ်ထက်မက အသုံးပြုလျှင် ယင်း၌ပါဝင်သော ဓာတ်တိုးဟန့်တားပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးသွားသည်။
▪ သံလွင်ဆီ၏ ကျန်းမာရေးကိုထောက်ကူသော သဘာဝသတ္တိများမှ အကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန် ယင်းကို တစ်သက်လုံး အသုံးပြုသင့်ကြောင်း အာဟာရဗေဒပညာရှင်များက အကြံပြုထောက်ခံကြသည်။
▪ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် သစ်သီးများပါဝင်သော မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွင် သံလွင်ဆီကို အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုပါက ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
[စာမျက်နှာ ၁၆၊ ၁၇ ပါ ရုပ်ပုံများ]
သံလွင်ဆီကို ရိုးရာနည်းဖြင့် ထုတ်ယူနေခြင်း
အလုပ်သမားများသည် သံလွင်သီးများသိမ်းရန် ရိုက်ချနေ
သံလွင်သီးများကို ကြိတ်ဆုံများဖြင့် ကြိတ်ချေ
ဆီနှင့်အနည်အဖတ်များကို သတ်သတ်စီခွဲထုတ်ရန် ဤရှေးစက်ကို အသုံးပြုခဲ့
ခေတ်မီဆီစက်မှ သံလွင်ဆီများ ထွက်လာ
[စာမျက်နှာ ၁၈ ပါ ရုပ်ပုံ]
အပေါ်– သက်တမ်းရှည် သံလွင်ပင်တောအုပ်
ညာ– ရှေးခေတ်သုံး သံလွင်ဆီမီးခွက်
ညာစွန်– ယေရှု၏ပုံဥပမာမှ သံလွင်ဆီမီးခွက်များ ကိုင်ဆောင်ထားသော အပျိုကညာဆယ်ဦး
နောက်ဆုံးကာလဟူသည် မည်သည့်အရာကို ဆိုလိုသနည်း
နောက်ဆုံးကာလဟူသည် မည်သည့်အချိန်ကို ဆိုလိုသနည်း
နောက်ဆုံးကာလပြီးနောက် မည်သည့်အရာ ဖြစ်ပျက်လာမည်နည်း
လေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေး သင့်အား အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေနိုင်ပုံ
သင့်ထံမှ ဘုရားသခင် အဘယ်အရာ မျှော်လင့်သနည်း
မိဘတွေ ဘာကြောင့် ငါ့ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတာလဲ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! ဧပြီ ၂၀၀၈
နိုးလော့! ဧပြီ ၂၀၀၈